Ny fotoam-pialan-tsasatra dia fotoana iray ahafahana mamolavola loko, satria fotoana hanaovana fanatanjahan-tena eny amoron-dranomasina miaraka amin'ny akanjo lava mamirapiratra mamirapiratra. Ny lava-bonin'ny akanjo salad dia tsy manary ny lanjany mandritra ny taom-potoana maro. Misy fialan-tsasatra marobe - avy amin'ny antsoantso mikiakiaka amin'ny kiriodra mafana. Noho izany, afaka misafidy ny tsara araka ny karazana fisehoanao ianao.
Ny endriky ny akanjo balsama salady
Koa satria ny lokon'ny lokony dia tsy manaloka ny hoditra amin'ny fomba tsara indrindra, ny bengy io alokaloka io dia tokony horaisina ho fanampiny sy tratrany amin'ny fotoana izay ny vatany dia farafaharatsiny kely noho ny solifara, raha tsy izany dia mampidi-bola ianao na manjary malahelo. Raha mbola tapa-kevitra ny hitondra ny akanjo balsama ho toy ny mainty ianao, dia milalao miaraka amin'ny voninkazo sy ny lamina. Esory ny fanamiana miaraka amin'ny:
maka sary "mozika";
Ny sarin'ireo "foko";
Ryusha, loko mifanohitra / loko.
Torohevitra amin'ny fisafidianana akanjo salady salady
Amin'ny alalàn'ny bengy salady dia afaka mamorona sary vaovao sy mivelatra ianao, saingy tsy tokony hohadinoinao koa fa manintona ny sainam-bolo tsara tarehy. Ary noho izany, mba hahatonga ny fanindrahindrana ny fananahana ankizivavy iray dia tokony ho voafidy ho an'ny tovovavy miaraka amin'ny tarehimarika mihomehy na amin'ny tsy fahampian-tsakafo madinika. Ankoatra izany, ity akanjo ity dia mety ho an'ny vehivavy "miaraka amin'ny endrika", raha toa ka tapaka ny vatana, na tovovavy. Amin'ny vehivavy lehibe izay tsy miraharaha ny tarehin'izy ireo, dia hitodika amin'ny fomba mahatsikaiky sy tsy misy tsininy izany.
Raha toa ka toa miadana ho anao ny kitapom-boankazo saloharim-boanjo na raha misy olona iray mitaky izany, dia azonao atao ny mizara azy ireo tsirairay, ka manova ny iray amin'ireo. Ohatra, raha tsy afaka mirehareha amin'ny tratra goavana ianao, fa manana kavina marevaka, dia hosoloina mena mangidy ny vozon'ny lila, ary ny voila, ny fanehoana ny fahamendrehana dia eo ambany alokaloka. Manitatra ny feny tery dia hanampy ireo akanjo salady eo amin'ny tadin'ny horita. Azonao atao ny mifantoka amin'ny tratra miaraka amin'ny bodisala salady miaraka amin'ny ravina, ruffles na rindrina, ary koa ny banda bra . Mazava ho azy fa hijery tsara ny akanjo miloko salady. Zava-tsarobidy mahafinaritra nofidiananao, miankina amin'ny ampahany amin'ny vatanao izay tianao hampiavaka sy hanamafisana.
Mipetraha amin'ny vongan-dranomandry amin'ny farany ambany
Ny akanjo marevaka indrindra
Akanjo lava volo vita amin'ny fotsy
Skirt styles ho feno
Sangisangy amin'ny mpanao gazety: ny orok'i Prince Charles sy ny Duchesse de Cornwall!
Fikarakarana radiaka amin'ny lohataona
Ny aretim-pisefoanan'ny eschemika - soritr'aretina
Sary amin'ny 2015 grady
Kitapo fanorenana eo amin'ny lakozia - iza no misafidy ny tsy ho diso fanantenana?
Cedarwood - ireo tsiambaratelon'ny fampiasana harona ho an'ny fahasalamana sy ny hatsaran-tarehy
Biby mahagaga ho an'ny fahavoazana
Mussels amin'ny saosy kanto
Karazan-tsakafo - ahoana no ahafahana miala?
New Collection Shellac - Herinandro 2014
Ny fahaketrahana - ny soritr'aretina amin'ny vehivavy, ny karazana ary ny fomba hivoahana amin'ny toetry ny fahaketrahana?
Muesli Bars - recipe